I-Formula 1 Izifundo zeMijaho yeMoto
Ubungqina behlabathi be- Formula 1 bulawulwa kwaye bulawulwa ngumzimba wehlabathi womqhubi wemoto oseFransi, obizwa ngokuba yi-International Automobile Federation. Amalungelo entengiso kwiF1 aqeshwe yi-FIA kumntu waseBrithani ogama linguBernie Ecclestone. I-NASCAR iphethwe yintsapho yaseFransi - ngokuchasene neli lizwe-nangona kunjalo, luloluhlu lwamacandelo obala.
I-Formula 1 Ayinayo i-NASCAR
Clive Mason / Getty Izithombe
Iimoto ze- NASCAR zifana nemoto oqhuba ngayo emgwaqweni omkhulu, iimoto zakho ezisisiseko. Iimoto ze-Formula 1 zibukeka njengezinambuzane-zineenkwenkwezi kunye namaphiko amade; iivili ziphela ngaphandle komzimba njengemilenze yezinambuzane kwaye abaqhubi babonakala phakathi kwazo zonke ezi njengeliso legciwane. I-F1 ibandakanya into eyaziwa ngokuba yinqanaba elilodwa, i-wheel-drive racing. Kwi-NASCAR, ngokuphambene, iivili zifihliwe, kwaye umqhubi uyajongwa kwaye akaxhomekanga ngaphandle kwepakpitini njengomqhubi weF1.
I-Formula 1 ayikho i-IndyCar
Ukuba uke wambona i-Indianapolis 500, ngoko uyazi ukuba iIndy izimoto zibukeka njani. Umncintiswano owenziwa rhoqo ngonyaka kwiveki yeSuku lweSikhumbuzo e-Indianapolis - ngumcimbi omkhulu kwixesha le-IndyCar. Unokucinga ukuba iimoto zibukeka njengezimoto zeF1. Kodwa, oku kuyingcamango nje, njenge-IndyCar ayikho ndawo kufuphi neqondo lobuchwepheshe njengemoto yeF1.
Okuthakazelisayo, ukususela ngo-2000 ukuya ku-2007 i-Formula 1 yaqhubela phambili kwi-Indianapolis Motor Speedway. Umncintiswano weFormula 1, ngelixa ukhangele izihlwele ezinkulu, akuzange kube yimpumelelo enkulu. Iimoto ze-Formula 1 azikhe zakhiwe ukuza kuqhubela umzila weevili kunye neembombo zebhanki. Isantya sabuyiselwa kwakhona kumqhubi weF1, kunye nenxalenye ye-infield esetyenziselwa umzila.
I-Formula 1 Ayifumani i-Formula 3 okanye i-GP2
Iifomula ze-Formula 3 kunye ne-GP2 zisebenza njengechungechunge lwamatshe abaqhubi abazama ukunyuka indlela yabo ukuya kwi-Formula 1. I-F3 kunye ne-GP2 ziphakathi kweendidi ezininzi zokutya eYurophu apho abaqhubi beentambo zihamba ngendlela efana neF1. zincinci kwaye zincinci. Ezi ntlanga zifundisa abaqhubi indlela yokulungiselela ukugijima kweF1.
I-Formula 1 ayikho Umzabalazo Wokunyamezela
Umdlalo weLe Mans - umcimbi weeyure ezingama-24 owenziwa rhoqo ngonyaka eFransi phakathi noJuni-ngowona mzekelo omkhulu wehlabathi lomncintiswano wokunyamezela. Ngokwahlukileyo, umkhosi we-Formula 1 Grand Prix - igama elinikezwa kuyo yonke imidlana yeFormula 1, njengeGarite Prize yaseMonaco okanye i-United States Grand Prix - ayihlali ngaphezu kweeyure ezimbini, kwaye idla malunga nemizuzu engama-90. I-Formula 1 ayikho ngokunyamezela. Kuthe malunga nokugijima kwe-sprint. Yingakho iifoto zeF1 zihlalisa rhoqo. Kwakhona, ukunyamezela iimoto eziqhubekileyo akuzange ziveze iivili, njengokuba iimoto zeF1 ziyenzayo, nangona ezinye zokunyamezela abaqhubi zivelele emoyeni. I-Formula 1 ayikho ngokunyamezela. Kuthe malunga nokugijima kwe-sprint. Yingakho iifoto zeF1 zihlalisa rhoqo. Kwakhona, ukunyamezela iimoto eziqhubekileyo akuzange ziveze iivili, njengokuba iimoto zeF1 ziyenzayo, nangona ezinye zokunyamezela abaqhubi zivelele emoyeni.
I-Formula 1 Ehlabathini Lonke
Ngokungafani nendima ekhankanywe ngaphambili, i-Formula 1 ngumcimbi wehlabathi jikelele, kungekhona nje uchungechunge lwezobuhlanga lwelizwe elinye. Amaqela eF1 asekelwe eNgilani, eJamani, eItali, eFransi, eJapan naseSwitzerland nakwamanye amazwe. Ngeentlanga ezili-18 ngokuqhelekileyo ngexesha lonyaka, ukhuphiswano oluninzi lwe-F1 lwenzeka kwilizwe elithile, nangona iJamani, iSpeyin neItali ngokuqhelekileyo ibamba iintlanga ezimbini zeF1 ngonyaka.
I-F1 Ngaba i-Pinnacle ye-Radi Technology
Iimviwo ze-Formula 1 ngokubanzi zichithe phantse ibingamabhiliyoni engama-dollar ngonyaka ukwakha imoto kwiintlanga ezingama-18. Le moto imele iqhutywe kwaye entsha yakhelwe ixesha elizayo. Iimoto zakhiwe nge-carbon fibre kunye nezinye izinto ezingekho izinto eziqhelekileyo, zonke ezo zinto zihamba ngeefowuni zeekomiti. Ii-injini zinamandla kunazo zonke kwihlabathi, i-electronics yinkxalabo kakhulu kwaye amaqela ayazi ngokusebenzisa i-computer sensors ukuba zonke iinxalenye zeemoto zenza ntoni ngexesha lomqhubi okanye uvavanyo naliphi ixesha elikulo mzila.
I-Formula 1 inezoDolophu eziPhambili
Iimviwo ze-Formula 1 zihlawula iinqwelo zabaqhubi - uMichael Schumacher, umzekelo, wathola imali engaphezu kwezigidi ezingama-30 ukusuka eFrrari ngexesha elilodwa, kwaye oko akubandakanyi uxhaso kunye nokuvumela. Bandakanya abo, kwaye umqhubi ophezulu we-F1 ufumana i-$ 80 yezigidi ngonyaka. Akunzima ukubona isizathu sokuba iF1 yilapho abaninzi abaqhubi benqwenela ukuphelisa khona, kunye nabaqhubi be-NASCAR. Kodwa kukho izihlalo ezingama-22 ukuya kwezi-24 ukuzalisa unyaka ngamnye, kuxhomekeke ekubeni ngaba amaqela angama-11 okanye ama-12.
I-Formula 1 Ngaba yeyona ndlela ininzi kakhulu yeMijaho
Ngokungafani nezinye iinqununu zokugijima kwevili, apho iqela liyakwazi ukuthenga i-chassis ngaphantsi kwesigidi seerandi kumqhubi wemoto, kwi-Formula 1, amaqela kufuneka ahlawule abasebenzi beengcali kunye nabachwephesha abaqeqeshe kakhulu. ukwakha imoto ngokukhawuleza. Bamele baqulunqe zonke iindawo-kwaye zibiza. Abaxhasi beeqela elikhulu zeF1 zihlawula ukuya kuma-$ 50 yezigidi ngonyaka ukwenzela ukuba amagama abo afakwe kwiimoto, okwenza iF1 izithuthi zeebhanki ezikhawulezayo zehlabathi.
Ukongeza kwindleko yemoto, iqela ngalinye le-F1 lithumela abasebenzi be-60 abantu kulo lonke uhlanga ukuze balungiselele imoto, baqhube ukusebenza kweendaba kwaye benze imisebenzi yokuxhasa. Amaqela abuye aqeshe abantu abayi-1 000 kwiifekthi zabo ukuba banyamekele ishishini kwaye bakhe imoto. Ayikho enye indlela yokugijima kwiplanethi isondela kule ndlela yokukhwa kwemali.
Iifomula ze-Formula 1 kwiiMpawu eziMkhulu kunazo zonke kwihlabathi
Kuyo nawuphi na owaziwayo ngembali yokugijima kwemoto, iingoma apho iintambo zeF1 Grand Prix zenzeka khona amagama aqhelekileyo. Omnye malunga nomntu wonke uyazi ngaphakathi kwesixeko saseMonaco kwiNxweme yaseFransi. I-Monaco Grand Prix kuqala yenzeke ngezitrato zesigxina se-city ngo-1929. I-F1 yabuya xa iqela lavela emva kweMfazwe Yehlabathi Yesibili, kwaye namhlanje uhlanga lwaseMonaco luhlala lusephambili kweli xesha.
Kodwa ezinye iitrakthi ziphinde zihlangane nembali:
I-Monza, ehlala kwinqanaba laseMilan, umzekelo, lide lide kuneMonaco njengomzila kwaye likhulu kakhulu ukukhangela abalandeli bezemidlalo.
I-Spa-Francorchamps eBelgium, ngaphantsi kweyure ukusuka eLiege, yenye yeendlela ezibalaseleyo kunye neembali. Ijikeleza ngehlathi leArdennes, kunye nabaqhubi, luhlobo lwe-roller coaster.
I-Formula 1 iye yafudukela kwiindawo ezintsha. Kwiminyaka elishumi edlulileyo, iingoma ziye zakhula zisuka eBhareni ukuya eShanghai naseKuala Lumpur ukuya e-Istanbul, zigqamisa ukufikelela kwezemidlalo.
I-Formula 1 Iimpawu zexesha elichaziweyo
I-Formula 1 Imoto njengeCabbon Fiber Cake
Indlela yokuLawula kwi-NASCAR Race Online
Ukuthatha i-LSAT phantsi kweemeko ezizodwa
Iingcebiso ezi-3 zokuphucula ukubhala ngesiNgesi
Iingcali zeDwala: iiMvumi ezinezikolo zeekholeji
Indawo yokuhlala kunye noKwahlula kweCawa kunye noRhulumente
IWitton University Admissions
Iincwadi zezixhobo zamaKristu